त्यसोभए त्यहाँ कुनै पेनाल्टी छैन र गुगलले प्रदर्शनको लागि संस्करण छनौट गर्दछ, त्यसोभए तपाईंले किन गर्नुपर्दछ नक्कल सामग्रीबाट बच्नुहोस्? दण्डित भइरहेको बावजुद, तपाईं मई अझै राम्रा दर्जा गर्ने तपाईंको क्षमतालाई चोट पुर्‍याउँछ। यहाँ किन छ:
प्रत्येक पृष्ठ को रैंकिंग भारी मा आधारित छ प्रासंगिक ब्याकलिlin्क बाह्य साइटहरूबाट तिनीहरूलाई। यदि तपाईंसँग समान सामग्रीको साथ pages पृष्ठहरू छन् (वा समान पृष्ठमा तीन पथ), तपाईं प्रत्येक पृष्ठमा ब्याकलिंक्स हुनसक्दछ बरु सबै पृष्ठभूमिमा ती मध्ये एउटामा अग्रणी। अर्को शब्दहरुमा, तपाई एकल पृष्ठ सबै ब्याकलिks्क सks्कलन गर्ने र राम्रो र्याकिंग गर्ने क्षमतामा चोट पुर्‍याउँदै हुनुहुन्छ। शीर्ष परिणामहरूमा एकल पृष्ठ श्रेणीकरण पृष्ठ २ मा pages पृष्ठ भन्दा धेरै राम्रो छ!
अर्को शब्दहरूमा ... यदि मसँग नक्कल सामग्री सहित pages पृष्ठहरू छन् र ती प्रत्येकमा back ब्याकलिks्कहरू छन् प्रत्येकले ... यसले १ rank ब्याकलिंक्सको साथ एक पृष्ठ पनि श्रेणी दिदैन! नक्कल सामग्रीको मतलब यो हो कि तपाईका पृष्ठहरू एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् र ती सबैलाई चोट पुर्‍याउन सक्दछन् बरु एक महान, लक्षित पृष्ठलाई श्रेणीकरण गर्नु भन्दा।
तपाइँ बिभिन्न व्यक्तिहरूको लागि निजीकृत गर्न सामग्री पुनःलेखनमा भ्रामक हुनुहुन्न, यो एक बिल्कुल स्वीकार्य मामला हो। नक्कल सामग्री। यद्यपि मेरो सल्लाह यहाँ छ:
साधारण स्क्रिप्टहरू वा प्रतिस्थापन सामग्री फार्महरू प्रयोग नगर्नुहोस् यस प्रकारको एकल शब्दहरू प्रतिस्थापन गर्न ... तपाईं समस्याको लागि सोध्दै हुनुहुन्छ र यसले काम गर्दैन। यदि म १ roof वटा शहरलाई समेट्ने छाना हो भने ... म बल्कलिks्कहरू र समाचार साइटहरू, पार्टनर साइटहरू, र समुदाय साइटहरू बाट मेरो एकल छत पृष्ठमा देखाउँदै उल्लेख गर्दछु। त्यसले मलाई श्रेणी दिनेछ र कतिवटा शहर-सेवा संयोजन कुञ्जी शब्दहरूका लागि सीमा छैन जुन म एक पृष्ठमा रैंक गर्न सक्छु।
क्यानोनिकल - एक प्रामाणिक लि your्क तपाइँको पृष्ठ मा एक मेटाडेटा वस्तु हो कि गुगल बताउँछ कि पृष्ठ नक्कली हो र उनीहरु जानकारी को स्रोत को लागी एक फरक यूआरएल मा हेर्नु पर्छ। यदि तपाइँ वर्डप्रेस मा हुनुहुन्छ, उदाहरण को लागी, र एक क्यानोनिकल यूआरएल गन्तव्य अपडेट गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ यो संग गर्न सक्नुहुन्छ रैंक गणित एसईओ प्लगीn। क्यानोनिकल मा मूल यूआरएल जोड्नुहोस् र Google लाई सम्मान गर्दछ कि तपाइँको पेज नक्कली छैन र मूल क्रेडिट को योग्य छ। यो यस्तो देखिन्छ:
यदि तिनीहरू अझै पनी पालना गर्दैनन् भने, उनीहरूको साइट का विज्ञापनदाताहरु लाई सम्पर्क गर्नुहोस् र उनीहरूलाई थाहा दिनुहोस् कि उनीहरू सामग्री चोर्दैछन्।
टैग: क्यानोनिकलशहर पृष्ठहरुकाउन्टी पृष्ठहरूनक्कल सामग्रीनक्कल सामग्री दण्डस्थानीय एसईओस्थान आधारित पृष्ठहरूबहु-स्थानmultilocationमिथकnoindexजैविक खोजजैविक खोज रैंकिंगर्याङ्किङ्गrobots.txtएसईओएसईओ उत्तम अभ्यासहरूएसईओ मिथकसामग्री चोरी